Sidee faallo uga bixin kartaa dib-u-dhajinta sare ee darajada bogga SERP?
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay macluumaad aad u xun oo ku saabsan dhismaha fikradaha dib-u-eegista iyo si xun u saameeya farsamadan. Si kastaba ha noqotee, waxaan rabaa in aad qaadato daqiiqad iyo istaraatiijiyadan istiraatiijiga ah. Inkasta oo sumcadda xun ee istaraatiijiyaddan, isticmaalka blog-ka ee faallooyinka ah sida istaraatiijka gadaasheed ayaa kaa caawin kara inaad abuurto xiriir wanaagsan oo aad la yeelatid macaamiishaada suurtagalka ah iyo inaad dhisto hay'addaada brand-ka ee suuqa dhexdiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad haysato hab sax ah si loo abuuro faallooyin dib u eegis si aad u hesho natiijo SEO ah. Haddii kale, waxaad u muuqan doontaa shaki ku jira indhaha makiinadaha raadinta iyo xitaa xitaa heli karaan ganaaxyada farsamooyinka dhismaha xiriiriyaha spammy.
Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonaa siyaabaha cusub ee helitaanka casiirka xidhiidhka ee faallooyinka. Waxaad illoobi kartaa wax walba oo aad horey u akhrisatay. Habka aanu kugula soconayno kuma aragno farsamooyinka dhismaha ee kale ee u baahan in la isticmaalo adeegsiga dofollow, nofollow, shuruudaha raadinta ama waxyaabo kale oo aad isticmaashay.
Habka cusub ee helitaanka faallooyinka faallooyinka
Aan ka wada hadalno marxaladaha aad u baahan tahay inaad raacdo si aad u hesho dib u eegis tayo sare leh muddo gaaban gudaheeda.
Raadi bangiyada saxda ah
Marxaladda ugu horreysa ee ololahaaga isku xirka xiriirka, waxaad u baahan tahay inaad hesho boodhadhka saxda ah ee soo saarista xiriiradaada. Waxaad u baahan tahay inaad sameysid cilmi-baaris suuqa ah oo aad ka hesho ilaha webka ee hela qaar ka mid ah taraafikada wanaagsan iyo ka qaybqaadashada. Ma aha mid cad in la raadiyo baqshadaha warshadaha ugu fiican. Halkii aad ka heli lahayd, waxaad ka heli kartaa barta internetka ee dhexe ama forumyada leh qaar ka mid ah qadarin fara badan oo faallooyin ah oo ku saabsan.
Si aad u hesho waxa aad u baahan tahay, waxaad gali kartaa su'aal gaar ah Google. Tusaale ahaan, haddii ganacsigaaga laga shaqeeyo goobta caafimaadka, waxaad waydiisan kartaa makiinad raadin loogu talagalay su'aalaha "TOP daawooyinka caafimaadka" ama "forums for physicians. "Sidaa darteed, waxaad ku dari doontaa liiska TOP blogyada oo ku saleysan saamiyada qaar ee bulshada waxayna ka faalloonayaan kuwa blogs hela.
Markaad ka heshid ku habboon ganacsigaagu u baahan yahay ilaha webka, waxaad sii wadi kartaa laanta soo saaro xiriirada soo socda ee faallo ka bixiyay boggooda. Waxay kaa caawinaysaa inaad kordhiso saldhigaaga goobaha lammaanaha.
Isticmaal akhbaarcelinta RSS ee Google Reader si aad u ilaaliso raadadka blogs ee ku jira suuqa. Abuuri faylasha kala duwan ee mawduuc kasta. Qalabaynta geeddi-socodkan, waxaad arki doontaa qaybaha ay ku yaalaan boostooyinka la cusbooneysiiyay dhawaan.
Isku day in aad marka hore noqotid
Laguma talinayo in aad dhisato fikrado faallooyin ah oo ku saabsan mawduucyada dhibta leh. Waxaad noqon kartaa kan ugu horreeya ee ka faalloodaya faallooyinka hoostiisa, laakiin kaliya ka dib marka uu si guud u akhriyo oo uu ka fekero jawaabta macquulka ah iyo jawaabta macquulka ah. Haddii xiriiriyahaaga koowaad uu ku mashquulo oo uu ku dhufto meesha, falanqeeyayaasha kale waxay u badan tahay inay riixaan si ay u eegaan cidda aad tahay. Taasi waa sababta haddii aad tahay kan ugu horreeya, isbeddelkaagu wuu ka sarreeyaa haddii aad ku socoto xisbiyada ka dib markaa falanqeeyayaasha kale ee badan Source .